Mpanamboatra fanariana famoahana poaka very - Mpamatsy serivisy famatsiam-bola any Shina ambony - mpamatsy vola Minghe Casting
Inona ny atao hoe casting
Investition casting, fantatra ihany koa amin'ny very ny fanamorana savoka, ao anatin'izany ny fizotran-javatra toy ny savoka fanindriana, fanamboarana savoka, fanangonana hazo, fametahana slurry, savoka miempo, fanariana vy metaly ary fitsaboana manaraka. Ny fanariana savoka very dia ny fampiasana savoka hanamboarana lasitra iray amin'ilay ampahany hatsipy, avy eo hosaronina fotaka ilay lasitra savoka, izay bobongolo fotaka. Aorian'ny ritra ny lasitra tanimanga, ataovy anaty rano mafana izy io mba handrendrika ny lasitra savoka anatiny. Esory ny lasitra tanimanga avy amin'ilay lasitra savoka narendrika ary ario ho lasa lasitra tanimanga. Raha vao natsatsika. Amin'ny ankapobeny, ny seranana iray mandraraka sisa tavela rehefa manamboatra lasitra fotaka, ary avy eo araraka ny metaly metaly avy amin'ny seranana mandraraka. Aorian'ny fampangatsiahana dia vita ny ampahany ilaina.
Rehefa mampiasa savoka ho toy ny lamina, ny casting casting dia antsoina koa hoe "casting wax wax". Ny fitaovana dia namboarina ho lamina, ary ny ambonin'ilay lamina dia rakotra sosona marindrano marobe mba hanamboarana akorandriaka, ary avy eo atsonika sy esorina amin'ny lasitra bobongolo ilay lamina mba hahazoana bobongolo tsy misy fisarahana. Aorian'ny fandroana hafanana avo dia azo fenoina fasika sy araraka. Satria ny lamina dia vita amin'ny akora waxy, ny fanariana fampiasam-bola dia matetika antsoina hoe "fanariana savoka very".
Fitaovana ampiasaina amin'ny fanariana savoka very - Karazan-tsivola fampiasam-bola
Firaka Magnetra maharitra
Nodular Cast Iron, sns.
Ny endrika famoahana fampiasam-bola dia sarotra kokoa amin'ny ankapobeny. Ny savaivony ambany indrindra amin'ny lavaka izay azo atsipy amin'ny casting dia mety hahatratra 0.5mm, ary ny hatevin'ny rindrina farany ambany dia 0.3mm. Amin'ny famokarana, ny ampahany sasany izay voaforona faritra maromaro dia azo natambatra. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny firafitry ny ampahany, dia azo noforonina ho toy ny ampahany tsy voatanisa izy ireo ary alefa mivantana amin'ny alàlan'ny fanodinam-bola mba hitsimbinana ny ora fanodinana sy ny fanjifana fitaovana vy, ary hahatonga ny firafitry ny ampahany ho ara-dalàna.
Ny lanjan'ny fandefasana fampiasam-bola dia mazàna hatramin'ny omby am-polony (manomboka amin'ny grama vitsivitsy ka hatramin'ny folo kilao, matetika tsy mihoatra ny 25 kg), ary manahirana kokoa ny famoahana casting mavesatra loatra amin'ny alàlan'ny famoahana vola.
Ny fizotran'ny fanodinam-bola dia sarotra kokoa ary sarotra fehezina, ary lafo kokoa ireo fitaovana ampiasaina sy lanina. Noho izany dia mety amin'ny famokarana ampahany kely misy endrika sarotra izy io, takiana amin'ny avo lenta, na fahasahiranana fanodinana hafa, toy ny lelan'ny motera turbine.
Minghe Casting dia ISO9001: 2015 voamarina mialoha china mpanamboatra ny maodely sy sarotra fametrahana marina savoka fitehirizana prototypes. Ny maodely na lamina resina na lamina dia mety ho vita ao anatin'ny ora vitsivitsy monja amin'ny rakitra data CAD na matematika. Ny prototypes metaly dia azo atao ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 4 herinandro ary ny ampahany amin'ny milina sy ny milina dia afaka mivoatra ao anatin'ny 3-5 herinandro. Indostria natolotra dia ahitana ny aérospace, automotive, fiarovana, marin-dranomasina, ara-pitsaboana, nokleary, solika sy gazy ary fitaovana ary maty.
Tombontsoa amin'ny fizotran'ny fanodinana vola
- Ny refy marina amin'ny refin'ny fampiasam-bola dia avo dia avo, amin'ny ankapobeny hatramin'ny CT4-6 (ny famafazana fasika dia CT10 ~ 13, ny famoahana maty dia CT5 ~ 7)
- Fanariana fitaratra rano, temperture ambany fanariana savoka very dingana, miaraka amin'ny fahafaha-mandefa vokatra manomboka amin'ny 0.5kg ka hatramin'ny 100kgs. Ny fitaovana ampiasaina matetika dia vy vy, vy firaka, ary vy tsy misy fangarony, fitafy mahatohitra sns.
- Ny famaranana ny fametrahana fampiasam-bola dia avo kokoa noho ny amin'ny casting amin'ny ankapobeny, amin'ny ankapobeny hatrany amin'ny Ra.1.6 ~ 3.2μm.
- Ny fampiasana ny fomba fanariana fampiasam-bola dia afaka mamonjy fitaovana fampitaovana masinina sy fanodinana ora-olombelona, ​​ary mamonjy akora vy.
- Ny fanariana fampiasam-bola dia afaka mandefa casting sarotra amin'ny alika isan-karazany, indrindra ny fanamafisam-peo amin'ny hafanana avo lenta. Ohatra, ny lelan'ny motera jet, ny mombamomba azy ary ny lavaka mangatsiaka, dia zara raha noforonina tamin'ny teknolojia fanodinana. Ny famokarana amin'ny alàlan'ny fanodinana famatsiam-bola dia tsy vitan'ny fanatratrarana famokarana betsaka fotsiny, hiantohana ny tsy fitovizan'ny casting, fa kosa hialana amin'ny fifantohan'ny fihenjanana amin'ireo marika antsy sisa taorinan'ny fanodinana.
Ny fanariana fampiasam-bola (fanariana savoka very) dia ny fampiasana ny savoka hanamboarana ny bobongolo amin'ireo faritra hatsipy, ary avy eo ny lasitra savoka dia mifono fotaka, izay antsoina hoe bobongolo tanimanga. Aorian'ny maina ny lasitra tanimanga, hafanana ary atsonika ny lasitra savoka anatiny. Esory ny bobongolo tanimanga aorian'ny famoahana ny lasitra savoka ary atsofohy ao anaty lasitra seramika. Amin'ny ankapobeny, ny rafitry ny vavahady dia tavela rehefa manamboatra lasitra fotaka, avy eo azo araraka ao anaty lasitra ny metaly metaly. Ampangatsiaho mandra-pahatongan'ny ampahany mivaingana dia vita ireo ampahany ilaina.
Atrikasa Wax Very ▶
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fametrahana fampiasam-bola
Ny serivisy fanamboarana Minghe Casting dia azo alaina ho an'ny famolavolana ny tena zava-misy sy ny haavo famokarana ambany ka hatramin'ny avo ny ampahany amin'ny fanariana maty, ny ampahany amin'ny fasikabola faritra, vy fanariana faritra, very fanariana casting faritra sy ny maro hafa.
Safidio ny mpamatsy Casting Investment tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fampanjariam-bola dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, Royaume-Uni, Alemana, Frantsa, Afrika atsimo, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana fampiasam-bola manokana dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny antsipirihanao momba ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa famoahana vola.